March 29, 2018 - Written by Editor
Boosaaso:-Diyaarada Duulimadaka ee Air Djibouti ayaa maanta waxaa ay si rasmi ah uga bilowday duulimadkeedii ugu horeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaso ee xarunta gobalka Bari. Diyaarada Duulimaadka ee Air Djibouti ayaa in mud ah waxaa wada hadalo kula jiray ganacsato reer Puntland ah waxaan duulimaadkeeda ay noqon doonta dalalka dariska la ah Soomaaliya iyadoona tegi doonta magaalooyinka Jabuuti,Hargeysa Bosaso iyo Muqdisho.
Gudoomiyaha Gobalka Bari, Yuusuf Maxamed Waceysa dhedo oo la hadlay saxaafadda ayaa soo dhaweeyey Air Djibouti isagoo sheegay in ay farxad u tahay bulshada reer Puntland duulimaadka Air Djibouti waxaan uu balan qaaday in ay shirkad Air Djibouti ay u fududeyn doonto wax walba oo ay uga baahdaan dhinac maamulka Gobolka Bari iyo dowladda Puntland.
Siyaasi Cali Cabdi Awaare oo hogaminayey Waftiga Diyaarada Air Djibouti la socdaya ayaa sidoo kale soo dhaweeyey duulimaadka ay Air Djibouti ka bilaabi doonto Boosaaso Airport waxaana uu shacabka ugu baaqay in ay ka faa,idaysatan duulimadyada ay diyaarada Air Djibouti sameyn doonto oo noqon doono mid qiimo jaban.
Dhinaca kale maamule ku xigeenka Ciise Guude Xaaji shirkada duulimaadka ee Air Djibouti oo la hadlay saxaafadda ayaa balan qaaday in dulimaadka Air Djibouti ay ka bilaabi doonto Boosaaso ayna tegi doonto dalalka Soomaaliya dariska la ah.
Hoos ka Daawo diyaarada air djibouti oo duulimadkii ugu horaysay ka bilaawday Puntland